Inona no atao hoe Misionan'ny Wiki? & Ndash; Semalt Mahalala Ny Valiny
Inona no atao hoe Misionan'ny Wiki? - Semalt Mahalala Ny Valiny
Milaza i Oliver King, manam-pahaizana Semalt , fa ny Wiki dia toy ny rakipahalalana nomerika izay afaka mirehareha amin'ny lohahevitra samihafa. Io no iray amin'ireo tranonkala be mpampiasa indrindra noho ny fahombiazany amin'ny fanomezana ny vaovao ilaina. Taorian'ny fananganana ny "Persoonia terminals", ity tranonkala ity dia manana lahatsoratra 5 tapitrisa izay mitantara lohahevitra samihafa. Ireo antoko samihafa dia manana ambaratonga amin'ny fanehoana ny fahalalany momba ireo foto-pampianarana samihafa eran-tany. Mampiasa Wikipedia ihany koa ny mpahay siansa mba handefa ireo zava-baovao fanta-daza.
Ankoatra izay, ny votoatin'ny Wikipedia rehetra dia manome ny fepetra ilaina sy ny andinindininy. Misy sary an-tsoratra tsotra sy rohy ary fampianarana ho an'ny fitaovana references. Afaka manontany amin'ny Wiki ny olona mba hahazoana torolàlana amin'ny lohahevitra samihafa. Ny mpiserasera rehetra dia afaka mamaky, manitsy, maneho hevitra ary mizara ny heviny amin'ny zavatra rehetra. Mba hanakanana tantara fohy lava, Wikipedia dia maimaim-poana ho an'ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao. Azon'ny mpiserasera ihany koa ny mamorona kaonty amin'ny mpampiasa azy.
Anisan'ireo tranonkala malaza 35 malaza indrindra, Wikipedia no hany fikambanana tsy mitady tombom-barotra izay mitaky toerana malalaka. Izy io dia atolotra amin'ny toerana manan-toerana 30 terabytes. Ny mpikaroka dia maminavina fa ireo lahatsoratra hita ao amin'ny pejy Wikipedia dia mampiasa references farafahakeliny 18million. Ireo andinin-teny ireo dia manana pejy mihoatra ny 2.5 lavitrisa isan'andro. Noho izany, Wikipedia dia manana fahalalana goavana, manoatra noho ny fahalalana rehetra iraisampirenena. Ny mpampiasa dia afaka mifandray amin'ny Wiki mba hanatanteraka asa maro.
Wikipedia dia natomboka tamin'ny 15 janoary 2001. Ny endriny voalohany nahitana ny pejy nentim-paharazana dia niseho tamin'ny volana Novambra tamin'io taona io. Nahatratra 2 tapitrisa ny lahatsoratra tamin'ny taona 2007. Tamin'ny taona 2009, nahazo 3 tapitrisa ny mpamaky ary nahazo 4million tamin'ny taona 2012. Ny iray amin'ireo asa goavana ataony dia midika ho fanomezan'izao tontolo izao ny fahalalan'ny olombelona rehetra!
Na eo aza ireo zava-bita ireo, Wikipedia dia mijanona eo amin'ny làlana iray mankany amin'ny tanjony. Hatramin'ny fanambarana ofisialy 5 tapitrisa, nanambara izy fa mila lahatsoratra maherin'ny 100 tapitrisa izy ireo mba handrakotra ampahany manan-danja amin'ny tanjon'izy ireo. Ny fanangonana ny habetsaky ny fahalalan'olombelona amin'ny tranonkala tsotra dia tsy asa tsotra hikarakarana. Ao anatin'ny resadresaka miaraka amin'ny Liber, tokony misy lahatsoratra maromaro momba ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao. Ny fironan'ny vohikala manandrify ny andrefana dia mety ho tonga amin'ny tsy fahampiana goavana Source .